5 Best Obodo ọṅụṅụ Iji-aṅụ na-agbalị Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best Obodo ọṅụṅụ Iji-aṅụ na-agbalị Na Europe
Europe bụ ihe magburu onwe nzukọ ebe ọtụtụ dị iche iche omenala - na culinary omenala. Mba ọ bụla nwere ya dị iche iche amata, nke na-adọta ndị ọbịa nri n'ime ya akụkọ ihe mere eme na ihe nile ọ na-enye. Na ná mba ụfọdụ,, na pụtakwara flavorful ọṅụṅụ!
Ndị gị onye njem ejikere gị okpo ọnụ na nwere ụfọdụ obodo mma fun ga ịbịa ná mba ndị a. Ebe a na-anyị n'elu 5 kacha mma obodo na ọṅụṅụ na-aṅụ ma na-agbalị na Europe:
1. Best Obodo ọṅụṅụ Na Italy: Limoncello
Limoncello na-a magburu onwe Italian mepụtara na i nwere ike ịhụ ihe niile gafee a mara mma mba. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na-ịchọrọ ị na-agbalị a ìhè lemon mmanya na ya kacha mma, isi Amalfi. Ebe ahụ, na mma Amalfi Coast, ha na-eme limoncello si kasị mma lemons na niile nke Italy. The mbụ uzommeputa eme ka a na ọṅụṅụ uto dị ka ihe aromatic lemoonu na bụ ubé ụtọ. Otú ọ dị, ịṅụ ya nwayọọ nwayọọ, n'ihi na ike ya nwere ike na-ị na mberede.
2. Bordeaux Best Obodo Wine - France
N'ihi na a wine n'anya, onye nke kasị mma obodo na ọṅụṅụ na-agbalị na Europe ga-abụ a Bordeaux wine. Ọ bụ ezie na ọ bụ a ma ama French mbupụ, ọ bụ na-otu ahụmahụ na-ịlele a enwekwa wine mgbe ke Bordeaux. A wine tour bụ a n'ụzọ zuru okè na inyocha na mpaghara na ya mmanya. Ihe ọzọ bụ na, ị ga-amụta ọtụtụ ihe banyere na-eme ka mmanya, ọmarịcha chateaus, na microclimates.
Ọ bụrụ na ị na-ahụ onwe gị na London n'oge okpomọkụ, ị nanị apụghị ịhapụ enweghị atụ Pimms Cup. Ọ bụ James Pimm onye mepụtakwara ọṅụṅụ ke ufọt ufọt 1800s, na o jere ozi ya na a nnukwu cup na nke ọ gbazinyere ya aha. Ọ bụ a-enye ume ọhụrụ ọṅụṅụ na-agwakọta fizzy lemoonu na Pimms No. 1, nakwa dị ka mkpụrụ Mpekere na Mint Sprigs. kpomkwem na-atọ ụtọ, na zuru okè n'ihi ụtọ na a nwayọọ ụbọchị n'oge okpomọkụ na a ubi ọnọdụ, Pimms Cup ga amara gị.
4. Best Obodo ọṅụṅụ Na Germany: schnapps
na Germany, Schnaps bụ nche anwụ okwu maka a siri ike na-aba ọṅụṅụ nwere ike nwere a dịgasị iche iche nke flavors. Ọmụmaatụ, i nwere ike a fruity Schnaps ma ọ bụ a ogwu dabeere otu. Anabata nke ọ bụla ị na-ahọrọ, ị ga-enwe a na-ewu ewu obodo ọṅụṅụ ga-akpali mmụọ nke Germany. The obodo n'anya na-enwe Schnaps mgbe a nnukwu, arọ nri, ebe ike ya enyere na mgbaze. Ya mere mgbe ị na-na Germany, na-eche free eri na-aṅụ elu!
5. Westvleteren Abbey Best Obodo Beer Na Belgium
Belgium bụ otu biya, ikekwe ọbụna karịa Germany bụ. Ma n'etiti niile ịtụnanya obodo Onye Belgium beers, e nwere otu nke ga-akụ aka gị n'ụkwụ unu. Abbey beers, makwaara dị ka Trappists, dị nnọọ ewu ewu na Belgium, ma Westvleteren Abbey biya bụ rarest otu. Iji nweta ya, mkpa ka ị na-edebe ya si Abbey 60 ụbọchị tupu oge. Otú ọ dị, ọ bụ ruru nsogbu.
Njikere na-enwe ndị kasị mma obodo ọṅụṅụ Europe nwere ike inye? Mkpọ akpa gị, mee ka gị na atụmatụ, na isi Zọpụta A Train ka AKWỤKWỌ gị Train Tickets ịhụ Europe na a dum dị iche iche ìhè!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Best Obodo ọṅụṅụ na Gbalịa na Europe” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-local-drinks-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#ọṅụṅụ #traveleurope .Tali London njegharị travelfrance travelgermany traveltips